Abazali abaningi kukhona amakhala yisisu kancane, ngaphandle ekuguleni kwakhe, kodwa uma nje izinyane akusho ukuya enkulisa noma esikolweni. Njengoba lesi sikhathi evamile ukukhanya esobala rhinitis ingxube liphenduka vesicular ezimhlophe zicatshangwe, udaka ophuzi kanye engakhohlakali yezindawo uketshezi lwamafinyila. Kuyinto kulesigaba isazi sezifo zezingane sinquma protorgolovye iconsi. Ukufundiswa izingane kanye nabantu abadala ilula, kodwa okwengeziwe ukuthi ithi kamuva. Ikhala elivuzayo has a umsebenzi zokuzivikela, okubonisa ukuthi amagciwane emzimbeni kuvela futhi uqala ukuba alwe nawo. Kodwa akusho ukuthi kufanele masinyane simbe ekhaleni vasoconstrictor lehla. Kungcono uxubha ekhaleni isixazululo zasolwandle, bese kuphela iphendukele protorgolu.
Kuyini lokhu protorgolovye lehla izingane?
Akubona bonke abazali ujwayelene protorgolovymi lehla ekhaleni, ngoba zenziwa eminyangweni of kadokotela futhi athengiswe kuphela kadokotela. Lokhu ibhodlela elincane elinjengentende kusukela ngaphansi ifolishi green nge isiyingi iraba kukakhokho kanye ushokoledi ketshezi. Dark uketshezi onsundu ayinaphunga, uma siqhathanisa nabanye amaconsi ekhaleni has ukunambitheka cishe ezibabayo. Buried yayo pipetted 1-2 lehla pass ngamunye bese ikhala umbala sinombala. Ukwakheka amaconsi zihlanganisa esiliva, okuyinto has a lot of izimfanelo ezinhle ukulwa namagciwane, kodwa hhayi amagciwane, kuqinisa amasosha omzimba. Odokotela linqume protorgol akubona bonke, kusukela esiliva zanqwabelana emzimbeni ngesikhathi ingxenye ukwelashwa kanye ebangela ukusabela iguliswa noma isifo argyrosis (ezimweni ezingajwayelekile kakhulu, nesiliva yezokwelapha kubangela isikhumba bluish).
Protorgolovye lehla: imfundo izingane kanye nabantu abadala kusitoreji
Kuye engu-1-5% ekhiqizwa isixazululo droplet eshalofini impilo izinsuku ezingu-30. Umuthi lilondolozwe imbala, kanti isitsha kumele kube ebhokisini, ukuze ukukhanya ehlela phezu protorgol. Ezandleni zezingane, lezi amathonsi ungatholi khona. Futhi into eyodwa ngaphezulu ngosuku lokufakwa kwesicelo. ERussia, abadala bazama ukulondoloza ukusetshenziswa kwezidakamizwa izingane eziningi ngemva okungapheli ngokwakho. Sicela uqaphele ukuthi protorgol kumelwe zilahlwe izinsuku ngokushesha ngemuva 30 ngemuva womshini yabo. Ukwakheka kwalo beshintsha ngokuhamba kwesikhathi, futhi kungabangela umonakalo hhayi kuphela mucosa, kodwa futhi wonke umzimba.
Protorgolovye lehla: imfundo izingane kanye nabantu abadala ukuze kwelashwe
Abazali abaningi aphathe ngokwabo protorgolom amakhala yisisu, eqaphela ngcono isimo: lula ukuphefumula, ukugeleza okusheshayo umkhuhlane ngisho ukunyamalala kwakhe ngosuku lwesibili ngemva isicelo ku kusaqalwa imikhuhlane. Ngenxa yale njongo aconsela 2 amaconsi pass ngamunye zingakapheli izinsuku 10-14 kabili ngosuku. Kungakhathaliseki ukuthi okufundile protorgolovye lehla izingane (izimpendulo abazali ', abangane, omakhelwane, abangane), ukwelashwa protorgolom ukhethe udokotela! Ungahlola ulwazi lwakho wezingane ngalezi amathonsi futhi ufunde ukuthi Daze yakho ukuzisebenzisa, kodwa hhayi ukuzithiba medicate. Standard, akhishwe ezimweni ezimbili: 1) kokusakaza umlomo wombhobho ukugeleza; 2) rhinitis ezingamahlala-khona. Esimweni sokuqala protorgol kuyasiza ezomile ikhala esimweni sesibili isetshenziswa ukuze kubulawe izinzwa ngoba lwamafinyila. Naphezu kweqiniso lokuthi ezinye nodokotela bezingane linqume lezi amathonsi neonates (izingane ezingaphansi kweminyaka engu-3 akunconywa iconsa phezu 3 izinsuku, izingane ezineminyaka engu-3 - izinsuku hhayi ningi than 5), kodwa amalungiselelo equkethe esiliva, WHO asivunyelwe ukunikeza izingane ezingaphansi kweminyaka engu-5 ubudala, abakhulelwe kanye nabancelisayo.
Ngokuvamile, isazi sezifo zezingane sinquma isikimu ejwayelekile ukwelashwa rhinitis ezinganeni:
Ukugeza amanzi asolwandle acinene lehla endaweni evundlile, "eshaweni" noma zangena yamanzi esimweni thwi bayichezukisa.
Ngemuva kwemizuzu engu-10 - instillation of vasoconstrictor lehla.
Ngisho emva kwemizuzu 10 - 1 iconsi instillation protorgola.
Kodwa bonke abantu bahlukile kanjani rhinitis kwenzeka futhi kwenzekani asabela ngayo imithi. Ngakho-ke, kuphela udokotela ukuya sinquma protorgolovye lehla (imfundo izingane kanye nabantu abadala akuyona njalo exhunywe ibhodlela, ngakho ngekhanda isincomo udokotela wezingane futhi ibhuku elisetshenziswa ngokwabelana). Ingabe akazibekanga medicate futhi ube nempilo!
Ukuthuthukisa ibhodi izingane ngezandla zabo: Master Class
Riddle mayelana izingane bear: ekusizeni izingane zabo zifunde ngalesi silwane eningi entsha
Endlunkulu "Nerf" eRussia: kanjani ukuba uthole izinkanyezi uthole Blaster kumnandi
Kamuva: ukuthi kuyini nokuthi ungayisebenzisa kanjani ngempumelelo emsebenzini wabo
"Chery Indis". isibuyekezo esigcwele
Ingabe Islam Islam is a myth noma ngokoqobo?